စိုင်းဆိုင်မောဝ် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / စိုင်းဆိုင်မောဝ်
Category Archives: စိုင်းဆိုင်မောဝ်
Sai Saing Mawt
မိစိမ်းသူ – စိုင်းဆိုင်မောဝ်+နွဲ့ယဉ်ဝင်း
၁။ ပျာယာခတ်သွားပြီ ၂။ ချစ်ဖူးမှ ငါ နားလည် ၃။ မိစိမ်းသူ ၄။ သားနှင့်ဇနီးသို့ ၅။ မိဆွေးသူ (နွဲ့ယဉ်ဝင်း) ၆။ မောမြေကိုလွမ်းတယ် ၇။ နေ့ခရီး ၈။ နွားကျောင်းသား ၉။ သာဓုပွဲဓလေ့ ၁၀။ မောင့်အတွက်ကျမျက်ရည် (နွဲ့ယဉ်ဝင်း) ၁၁။ မိဆွေးသူအလွမ်းသုံးနှစ် ၁၂။ အချစ်လလေးကွယ်ပြီ ၁၃။ ဝေးသောအရပ်မှဝေးသောအရပ်သို့ Download Link : http://www.mediafire.com/?n7fp3wf0r461fna Credit – Ko Aung Zaw Htaik
March 19, 2013 Snuo Mwoani နွဲ့ယဉ်ဝင်း စိုင်းဆိုင်မောဝ် Leaveacomment
စိုင်းဆိုင်မော(၀်) ဘ၀မှတ်တိုင် ၁ + ၂
September 9, 2010 ချစ်သားငယ်လေး စိုင်းဆိုင်မောဝ် Media3Comments
01 – အမေတစ်ခု သားတစ်ခု – ထူးအိမ်သင် 02 – အမေ့မျက်ရည်ကြွေမှာစိုး – မင်းဂျွန်ဆင် 03 – အမေ – မျိုးကြီး 04 – အမေနေကောင်းလား – ထူးအိမ်သင် 05 – အမေ့မေတ္တာ 06 – အမေ့ရုပ်ရည် – ဆိုင်းထီးဆိုင် 07 – အမေ့ရဲ့ ထမီလေးတစ်ထည် – ဘိုဖြူ 08 – အမေတစ်ခုသားတစ်ခု – လားရှိုးသိန်းအောင် 09 – ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမီ – ဟယ်ရီလင်း 10 – ဂရုဏာရှင် – CJZ 11 – ထိပ်ဆုံးမှာ အမေ – … Continue Reading →
June 17, 2010 Yee Wai Aung ဘိုဖြူ အခွေ (အများ) စိုင်းထီးဆိုင် စိုင်းဆိုင်မောဝ် ထူးအိမ်သင် ရဲလေး လားရှိူးသိန်းအောင် မျိုးကြီး ဟယ်ရီလင်း2Comments
တစ်မြေထဲမှာ – ၂
၀၁။ ချစ်ကြပါ – စောဖိုးခွားနှင့်အဖွဲ့ ၀၂။ မနောအလှပန်းမောင့်ချစ်သူ – အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၃။ ကောင်းလေးချစ်သူ – ဆုန်သင်းပါရ် ၊ စင်ဒီ ၊ ကြိုးကြာ ၊ မေရီလင်း ၀၄။ အပျိုဟိုင်းကြီးရဲ့  ဒေါသ – SNO ၀၅။ မလွမ်းဘူး – ကေကေ ၀၆။ ကိုယ်ပိုင်အချစ် – နန်းမြတ်သန္တာကို ၀၇။ အလွမ်းပြေထိုင်ခုံတန်းလေး – စံပီး ၀၈။ အေးဆေးပဲ – အားမူ ၀၉။ ကမ္ဘာနဲ့အချစ် – ဘရိတ်ကီ အားမူ ၁၀။ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခြင်း – ဇမ်းနူး ၁၁။ ငွေတောင်တန်းဆီပြန်လာပါ – စိုင်းဆိုင်မောဝ် … Continue Reading →
May 17, 2009 Snuo Mwoani ကြိုးကြာ အားမူး အယ်လ်ခွန်းရီ စိုင်းဆိုင်မောဝ် စင်ဒီ နန်းမြတ်သန္တာကို ဖြူနှင်းပွင့်သွေး လေးလေးဝါ3းComments
စိုင်းဆိုင်မော(၀်) Gold Collection Vol.03
တစ်လောက (တစ်ပတ်လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်)…. စင်္ကာပူက ရှမ်းတိုင်းရင်းသား တေးချစ်သူများအတွက် ရှမ်းအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ …. စိုင်းဆိုင်မော(၀်)ရဲ့သီချင်းများ စုစည်းမှု တစ်ခုပါ….နားထောင်….ပြီး…. စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်….တင်ပေးလိုက်မယ်…။ ခင်မင်လျက်….. Chit ZaNee ATwet Tay – Sai Saing Maw
December 5, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) စိုင်းဆိုင်မောဝ် Myanmar Artist4Comments
စိုင်းဆိုင်မောဝ် – ဘ၀မှတ်တိုင် ၂
၁။ ရှမ်းပဲပုပ်လေးကျွန်တော် – စိုင်းဆိုင်မောဝ် ၂။ စက္ကူပန်းအချစ် – စိုင်းဆိုင်မောဝ် ၃။ ငါ့ကျမှအသည်းကွဲ – ဂရေဟမ် ၄။ ချစ်ဇနီးအတွက်တေး – စိုင်းဆိုင်မောဝ် ၅။ တစ်ဖက်တည်းလိမ့်တဲ့ဘီး – စိုင်းဆိုင်မောဝ် ၆။ ကိုယ်ပေးတဲ့အချစ် ပြန်ဆပ်ခဲ့ပါ – ပူစတား ၇။ တောင်ပြာတန်းကသိတယ် – စိုင်းဆိုင်မောဝ် ၈။ တစ်ဖက်သတ်ချစ်သူ – နိုဗယ်ခင် ၉။ ကျမျက်ရည်အကြေညာတော့ဘူး – ဖြိုးဝေမင်း ၁၀။ ငွေတောင်တန်းဆီပြန်လာပါ – ဖြူ ၁၁။ တည်နေမြဲ ချစ်နေမြဲ – စိုင်းဆိုင်မောဝ် ၁၂။ ညောင်ညိုရိပ်က ချစ်စကား – စိုင်းဆိုင်မောဝ်
September 17, 2008 mmsong အခွေ (အများ) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းဆိုင်မောဝ် ဂရေဟမ် ဖြူ Myanmar Artist 1 Comment
စိုင်းဆိုင်မောဝ် – ဘ၀မှတ်တိုင် ၁
၁။ ဘာလိုသေးလဲ အချစ်ရယ် – Examplez ၂။ အိပ်မရတဲ့ ညပေါင်းတွေ – ဂရေဟမ် ၃။ ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်တယ် – Teens ၄။ အချစ်၏ အားနည်းချက် – ဘိုဖြူ ၅။ ဧပြီအချစ်ရဲ့အမုန်း – ရင်ဂို ၆။ လွန်းကြင်ငှက်အသည်း – ချောစုခင် ၇။ တစ်ရွာသားနဲ့ ပ၀ါပါး – စိုင်းဆိုင်မောဝ် ၈။ မတွေ့ကြရင် အကောင်းသား – ဖိုးကာ ၉။ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘော – အိစံ ၁၀။ အရှုံသမားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး – ချစ်ကောင်း ၁၁။ မခွဲခင်လေး ပြောချင်တယ် – ဒီလေး ၁၂။ ချယ်ရီပန်းလေးအသည်းပေးမယ် – စိုင်းဆိုင်မောဝ်+စိုးစန္ဒာထွန်း
September 17, 2008 mmsong ဘိုဖြူ ဖိုးကာ အခွေ (အများ) စိုးစန္ဒာထွန်း စိုင်းဆိုင်မောဝ် ဒီလေး ဂရေဟမ် ရင်ဂို ချောစုခင် ချစ်ကောင်း Example Media Teen 1 Comment
စိုင်းဆိုင်မောဝ် – UNPLUGGED LIVE
၁။ ရိုးရာမပျက်တဲ့မြေ ၂။ ချစ်ရီသက်သေမောင့်မျက်ရည် ၃။ တောင်ပေါ်ရှမ်းကလေး ၄။ မောင်ပေးတဲ့အချစ်ပြန်ဆပ်ခဲ့ပါ ၅။ မူဆယ် နမ့်ခမ်းလမ်း ၆။ မတွေ့ကြရင်အကောင်သား ၇။ အလွမ်းမပေးသွားနဲ့နန်းရယ် ၈။ ရှမ်းစကားလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ် ၉။ အိပ်မရတဲ့ညပေါင်းတွေ ၁၀။ နွေအလွမ်း
September 16, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းဆိုင်မောဝ် Myanmar Artist3Comments